Diyo post :: पदबाट हटाइएकामा आश्चर्य लागेको छ – ज्ञवाली
पदबाट हटाइएकामा आश्चर्य लागेको छ – ज्ञवाली - Diyo post
अब शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलबभत्ता, चौमासिक खारेज हुनेगरी यस्तो छ शिक्षा मन्त्रालयको तयारी !
काठमाडौं, १० माघ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकले पाउँदै आएको चौमासिक तलब भत्तालाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । अब शिक्षकले मासिक ...
भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ राप्रपाको महाधिबेशन, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ। आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने भनिएको ...
यस्तो सामग्रीले विद्युत मिटर विगारिन्थ्यो, यसरी पक्राउ परे सुपरभाइजर सहित १२ कर्मचारी
काठमाडौं, माघ १ । विद्युत चोरी कार्यमा समलग्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुपरभाइजरसहित ...
अझै पाएनन पिडित ले पहिलो किस्ता , टहराकै वास के हेर्दैछ सरकार
काभ्रे संवाददाता, काभ्रे ,माग ९ । भुकम्प गएको २२ महिना पुगिसक्दा पनि काभ्रे पिडितहरुले अझै अनुदान स्वरुप पहिलो किस्ता बापत ...
सुनकाण्डबारे महासेठको खुलासा, को को हुन त आरोपि..?
काठमाण्डौ, ८ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले सुन पछिल्लो समय तस्करीमा गृह ...
लोडसेडिङ हटाउन टेलिकमको सहयोग, मोबाइलमा आउन थाल्यो यस्तो सन्देश
काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थालेको लोडसेडिङ मुक्त पार्ने अभियानमा नेपाल टेलिकमले पनि सहयोग गरेको छ । टेलिकमले ...
सञ्चारमन्त्रीले ‘आफ्नो मान्छेलाई रेडियो नेपालको ‘हाकिम’ नियुक्त गरेपछि माओवादी पत्रकारमा हल्लिखल्लि !
काठमाडौं, ६ माघ । सञ्चार मन्त्री सुरेश कुमार कार्र्कीले रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गरेपछि माओवादी केन्द्र निकट ...
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चरित्र हत्या गर्ने को–को ? के होला कारबाही ?
काठमाडौं,५ पुस । दुइ वर्षअघिको जेठ महिनामा एउटा घटना निकै चर्चामा थियो–‘बामदेव–राजु साह प्रकरण । तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राजधानीको ...
यमबुद्धको पोस्टमार्टम रिपोर्ट : ‘श्रीमतीसँगै वाइन पिएका थिए,बंगरा भाँचिएको भेटियो ’
लन्डन, ५ माघ । चर्चित गायक स्वर्गिय अनिल अधिकारी यमबुद्धको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । शनिबार लन्डनको नर्थहोल्टस्थित आफू बस्दै ...